ချိန်းတွေ့ - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
ရဲလ်အခမဲ့ရောအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊စိတ်ကူးယဉ်သီချင်းရော၊အဆင့်အတန်း၊လိင်၊အဆင့်အတန်း၊သို့မဟုတ်ရုံရောဘဲ။ အခုသူ။ မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်ထဲကိုဘဲ။ ဖန်တီးသင့်ပရိုဖိုင်းနဲ့စတင်ရန်ငါတို့သည်တွေ့ပါမယ်။ ကျနော်တို့၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်။ ကျနော်တို့မျှဝေကြဘူး၊နှင့်ကျနော်တို့အပြည့်အဝအာမခံတစ်ဦးချင်း။ ဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူ။ ကျနော်တို့သူတို့နှင့်အတူများကို၌ရှိသမျှသောကိရိယာကိုအသုံးပြုဖို့အလွယ်တကူတွေ့ဆုံပြီးရှာဘဝပုံစံ။ အစဉ်အမြဲထိတွေ့နေဖို့နှင့်အတူမိုဘိုင်းဗားရှင်းများ။ ယနေ့ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နက်ရောအခမဲ့ပါဘဲ။ ချိန်းတွေ့သင်တို့၌စိတ်ဝင်စားခြင်းငှါ:ကိုလံ၊ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ အယ်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်မြို့၏ရုရှားနှင့်ကမ္ဘာ။
နေ့တိုင်းကျွန်တော်မကြာခဏကြားအမျိုးမျိုး၏ထင်မြင်ယူဆကြောင်းနည်းလမ်းအသစ်များ၏နှင့်ချိန်းတွေ့သည်အတုဆက်သွယ်ရေး။ အင်တာနက်ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်မတို့ကိုရှာတွေ့အသစ်၊မိတ်ဆွေကောင်း၊အလုပ်လိုအပ်။ ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွက်စီးဆင်းကွန်ယက်:အလုပ်၊အပန်းဖြေခြင်း၊ဖျော်ဖြေရေး၊စျေးဝယ်ခြင်း၊လူမှုရေး၊နှင့်အပင်။ အတုကမ္ဘာအရပ်လူတိုင်းသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်သူတို့အလိုဆန္ဒ၊အရာအဘို့ခွင့်မပြုပါဘူးအဖြစ်မှန်။ လူအနည်းငယ်ကနေ့များကိုရရှိရန်နိုင်လိမ့်မည်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သွားကြဖို့ကျွန်တော့်ကိုမေးမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးရဲ့ဖုန်းအရေအတွက်ကို။ အင်း၊သင်လိုသောလူတစ်ဦးကိုသင်နားလည်ကြောင်းအလမ္း၊အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါ၊ဘယ်မှာသင်၏ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ရှာတွေ့လျှင်၊အများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်အလုပ်လုပ်၊နှင့် အိမ်ပြန်နှင့်ဆက်လက်အပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်အလုပ်အိမ်မှုကိစ္စ? မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများဒိန္းေမးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒီမေးခွန်း။ တကယ်တော့၊အများအပြားရှိပါတယ်မုခ်ဦးများ၊ချက်တင်၊လူမှုရေးကွန်ယက်၊အပိုဆောင်းသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ။ ဒါပေမဲ့အားလုံးပြီးနောက်၊ပထမဦးဆုံးအရာကတော့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ချိန်းတွေ့ဒိန္း-ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စာမျက်နှာများတွင်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများနှင့်အမြို့မြို့အထိရှစ်ယောက်နှင့်အထက်။ ဒါဟာနုပျိုရှင်သူရုံမရှိခြင်းဆက်သွယ်ရေး၊နှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူအမျိုးသားများအတွက်အသက်နဲ့အမှန်အလုပ်ချိန်များအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ။ ဒါပေမဲ့မေတ္တာ၊နွေးထွေးမှု၊နားလည်မှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၌ဒိန်းမတ်၊ဆွီသူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းရှိသည်ဖို့လက်လှမ်းသတင်းအခြားအသုံးပြုသူများ၏။ သူတို့ရေးထားအက္ခရာများ၊စေချီးမွမ်းပေး၊လှူ၊ဂိမ္းကစား၊ဖတ်ရှုရာအပေါ်ခရီးသွားလာမှု၊ဆက်ဆံရေးနှင့်ချစ်ခြင်း။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဒိန္းများကိုသင်ရှာခွင့်ပြုသူငယ်ချင်းများ၊အသက်ဝိညာဉ်အိမ်ထောင်ဖက်၊ပိုကောင်းသေး၊အပင် ထွက်၏။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာအတွက်စိတ်ဝင်စားဝါသနာအသီးအသီးအခြား၊အကြံဥာဏ်ပေးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမျှဝေဖို့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေ။ တခါတရံမှပြောဆိုရန်ပိုပြီးမျှဝေဖို့ငါ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုအစိမ်း၊နှင့်သေချာသောသူမည်မဟုတ်လိမ်လည်၊လှည့်ဖြားမသ၊မကဲ့ရဲ့၏။ လူအမြင်ကြီးမားပုံကိုထက်အများသူသိတယ်သင်ကျောင်းကနေ။ သွင်မိတ်ဆွေတွေဘူးလိုဘာမှမထံမှ။ သူတို့ပဲရှိသည်၊အမြဲအလိုလိုအကူအညီအနားပေးအကြံဉာဏ်ကောင်း။ စိတ်ဝင်စားစရာအများအပြားပင်သံသယသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လာပြီးသူတို့အဘို့အပိုထက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားအသစ်တစ်ခု၏အဆင့်။
အလည်အပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား များအတွက်အပိုဆောင်းအချက်အလက်များ၊အဖြစ်လေ့လာဖို့အကြောင်း၊စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလားအလာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်း။ အတွင်းဘွဲ့ရဆွေးနွေးပွဲစနိုင်မည်အကြောင်းသင်ယူရန်အတွေ့အကြုံအဖြစ်သတင်းထောက်နှင့်သင်၏လက်ရှိရာထူး။ သင်အမြဲပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့လို့မရကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်၊သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာ၊အလုပ္အကိုင္မ်ား၊လျှောက်လွှာကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊စသည်တို့ကို။အတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းသို့မဟုတ်တဆင့်၊ဖုန်းဖြင့်။ ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့မျှော်သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိ။ အို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ဂျာမဏီ၊သြစတြီးယား။ ၎ႏ၊ဒေသဆိုင်ရာဧည့်ခံမန်နေဂျာများအတွက်ဂျာမဏီ၊သြစတြီးယား၊၎-ငါတို့သည်လည်းသင်ဖိတ်ခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်လင်းကာလတွင်၊ဘယ်မှာသင်ပိုမိုသင်ယူနိုင်နှင့်အချက်အလက်များရမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂလိကကျောင်း၏ဟိုတယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု။ ရောက်ပြသစည္။ တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများ၊ဆရာ၊ဆရာမများနှင့်ဝန်ထမ်းများ။ သင်အတွက်စိတ်ဝင်စားလေ့လာမှု၏သင်တန်းမှာတော်မူ ၊သင်မူကား၊သေချာမသိကြ? စီစဉ်အပုဂ္ဂလိကသွားရောက်ကြည့်ရှု ပြရာအားလုံးသင်တို့ပတ်လည်။ လေ့လာသင်ယူအတွက်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအကြောင်းပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊၊ကျောင်းသားအစပျိုး၊တကၠအင်္ဂါရပ်များ၊နှင့်အရာအားလုံးကိုသိလို။ အတွေ့အကြုံထူးခြားတဲ့နယ်မြေလေထုအဘို့အခရီးဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုများအတွက်နေ့လယ်စာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏။
အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုများအတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်အလွတ်သဘောဆက်သွယ်ရေးအကြားလူတွေ၊သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအဘို့လည်းသုံးနိုင်တယ်တစ်ဦးကိုအလုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အစည်းအဝေး။ အဘယ်အသုံးပြုခြင်း၏ကောင်းကျိုးများဗီဒီယိုချက်တင်နေ့စဉ်အသက်တာ၌? အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုသူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်အင်တာနက်အပေါ်အခါသင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်တွေ့ဆုံရန်တစ်စုံတစ်ဦး။ ယူသည့်အွန်လိုင်းဗျူးနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၌တည်ရှိသောအခြားမြို့နဲ့သွားဖို့၊ဒါပေမယ့်သင်နိုင်ဘူး။ လြဲေသာအကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်လူတိုင်းတတ်နိုင်ရှာတွေ့ခံရဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏။ ဖုန်းတွင်၊တစုံတခုမျှမရှိကြောင်းပြောဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုကွန်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာအၾကားမြို့။ သင်ဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားစရာအင်တာဖေ့စ်နိုင် ဆောင်းလူတို့နှင့်အတူဘုံအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အသုံးများတယ်။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကိုဆက်ကပ်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းငွေရှာဖို့အမျိုးမျိုးအတွက်လှုပ်ရှားမှုများဗီဒီယိုချက်တင်ရကူညီနိုင်တို့နှင့်အတူအချို့သော နှင့်စေလိုမီသင်မြင်ကလူတစ်ဦးအတွက်။ သင်အမြဲအဆုံးသတ်စကားပြောဆိုမှုမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မရှင်းပြဒါဟာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှ။ နဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ရန်ခွင့်ပြုခံရဖို့သင်မည်သူမဆိုနှင့်တချိန်တည်းမှာပင်။ သင်လုပ်နိုင်နှင့်အတူတက်လာမည်အသစ်နှင့်အသစ်သောအသက်တာဇာတ်လမ်း။ ဗီဒီယိုချက်တင်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်တစ်ဦးတပြင်လုံးကိုစိတ်ကူးသင်၏အသက်တာ၌။ ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ချင်တယ်ကနေတဆင့်ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ်သင်မှတက်ဖြစ်။ သို့သော်အဘယ်အရာသည်အလွန်အဆင်ပြေတီထွင်ပေမယ့်၊အားလုံး၎င်း၏အားနည်းချက်များ၊တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူဖြစ်စေဆက်သွယ်အကြောင်းတစ်ဦးကလူနေမှုပုံစံစတဲ့၊ဒါပေမဲ့သူကသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါနှင့်အတူတစ်ခက်ခဲတဲ့အခြေအဆာင္ရြက္သြားခ်င္ပါတယ္။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်များမှာတက်ရောက်အားဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအရေ၊အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၊ကလေးများ၊ဆယ်ကျော်သက်နှင့်ပင်အဘိုးအဘွားသောကြောင့်၊စကားပြောရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမအသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်၊ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူးအသက်ဘယ်လောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊သင်အနည်းဆုံး သို့သော်၊ကျနော်တို့နေဆဲပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်း။ အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချက်တင်ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်ရောက်မှအဓိကအားဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ကရိန္း၊ဘီလာရုစ်၊ကာဇက်စတန်နှင့်အခြား နိုင်ငံများ၊ဒါပေမယ့်မှတ်သားထိုက်သောစကားပြောအသံလွှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းနှင့်ရောက်ရှိနိုင်မှမည်သည့်နိုင်ငံ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်တို့အဘို့အထွက်ခွာသွားနှင့်ဆက်သွယ်ချင်တယ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ရာက္ဖို၊ယခု၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းမှဖွင့်လှစ်သင်။ ကျနော်တို့မျှဝေမနေပါနဲ့လူတွေကိုတစ်ခုခုနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်အခားများ၊တိုင်းဧည့်သည်မှချတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေ။ ဝဲနေတယ်ဆိုရင်၊အများဆုံးဖွယ်ရှိသင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ထားကြ၏။။။။။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုတစိုက်ထိပ်၌။ မှရနိုင်တယ်အပေါ်ပိတ်ပင်ထားကစားတဲ့? မရှိပါ၊ကိုယ့်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ပြီးအဆိုပါစနစ်အလိုအလျှောက်မူလေနရာ။ ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊တစ်ကမ်မိုက်အသုံးပြုကြပါတယ်၊အကြီးမားတဲ့အားသာချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောသည်၎င်း၊ကိုက်ညီအပေါင်းတို့လိုအပ်ချက်များ၊ဗီဒီယိုစကားပြောဘူးနှေးကွေးသွားတတ်၏လေထုအပေါ်နာရီပတ်လည်။ ကစားတဲ့အထူးဗီဒီယိုစကားပြော၊ဒါပေမယ့်လည်းနိုင်ငံခြားလာ့ဂ္နာ၊ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောရုရှားအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်အကောင်းဆုံးချက်တင်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ စကားပြောသောယဉ်ကျေးမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာပါ၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်၊ဒါပေမဲ့အတွင်း၊အလည်အပတ်လောက်လည်ဖို့၊ကိုယ့်အတိအရီ။။။။။ သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအတွက်တရားဝင်စတိုးဆိုင်ဒီအတွက်လည်းပဲကြည့်ဘို့ချက်တင်ကစားတဲ့၊အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးကြွလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်မိုဘိုင်းဖုန်း၊မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောမဟုတ်မှတ်ပုံတင်ဘို့လိုအပ်သည်၊တံခါးလုံးဝအခမဲ့နှင့်အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ကစားတဲ့အခေါ်အရွယ်ကြောင့်ရှိပြီးသားပါ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ပြောချင်ကပိုရစေရန်၊ဒါကြောင့်ပြီးသားတစ်ဂန္ထဝင်။ ဝင်ကစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာပိုပြီးပျော်စရာအတူတကွ။ သင်ရှာတွေ့နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါလိပ်စာ:ဗာမြို့လမ္းဓာတ် ။ ကြားခဲ့သည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ထိုမြေပုံပေါ်တွင်။ အာရုံမီ၊သင်ကြည့်ရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံး၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပေးပါအီးမေးလ်ကနေတဆင့်။
သိုပြောင်။ လူဒီနေရာမှာအွန်လိုင်းဆက်သွယ်စကားပြောဘို့အချိန်းတွေ့၊ချိန်းတွေ့၊၊အင်တာဗျူးများ၊ပုဂ္ဂလိကအစည်းအဝေးတွေ၊စွန့်စား။ အခမဲ့ချက်တင်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုတည်းယောက်ျားသိသောအမျိုးသမီး။ အွန်လိုင်းရောစကားပြောများအတွက်အဆက်အသွယ်ကို၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေး။ ချက်တင်အတွက် ပိုင်ဆက်သွယ်ရေး။ လျှင်သင်လာရန်အခန်းလတ်ဆတ်သောကောင်း၊မတူထုံးစံအတိုင်း"အတွက်ကှေဲအ"နှင့်ချက်ချင်းစွက်ပါ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုမှာလူနှင့်လေသင်အသက်ရှူခြင်း။ သင်တို့ကြားလျှင်ကာတွန်း၊ငါပြုဦးမည်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်မူကား၊လေထုနှင့်လူများအတွက်ဒီအခန်းနေကြတယ်၊လျှင်မမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ထိုအခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပိုကောင်းသွားအားဖြင့်အခန်း။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ရော၊ပိုကောင်းရုံစစ်ဆေးလျှင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုရင်တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကစက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်၊ငါတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါလျော့နည်းညစ်ညမ်း။ အနှောက်အယှက်နှင့်အထပ်ထပ်ပြောထပ်သောရှောင်ရှားအတွက်"သင်သည်မီတာသို့မဟုတ်?"စကားပြောခန်း၊ဒါကြောင့်အကျိုးလျှင်အခြားသူများအဖို့အနစ်၏ အက်ားအရာသင်ပိုင်။ ငါသာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်များအတိုင်းအချိန်၊ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးမထားခဲ့ဖို့ဤသူခံစားချက်များကိုအခြား ! သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အတွက်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်များအဖြစ်သင့်၊ရောဂါကူးစက်ခံရ။ လျှင်သင်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာစကားပြဿနာများ၊သင်ရှာတွေ့နိုင်မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြချင်တစ်ဦးအတွက်သီးခြားအခန်း။ ရိုးရိုး ပြီးနောက်၊မေးတဲ့မေးခွန်းအတွက်ဖော်ရွေအများပြည်သူနေရာများ။ အကူအညီအရင်ကဆိုရင်များအတွက်! တဲ့အခါ"မျက်နှာ"မှကြွလာ၊ငါမှတ်မိ၏ပထမဦးဆုံးစကားပြော။ ဘဲမည်သူမဆိုသင်ကူညီ?"ထိုအခါငါလုပ်ပေးမယ်။ ဘဲမည်သူမဆိုသင်ကူညီ?"ထိုအခါငါထိုသို့ပြုပါလိမ့်မယ်၊ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောမင်းသားအနွယ်၏ နှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦး။ တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်အပြောစကားတိုက်ရိုက်သင်ဖို့၊သုံးသင့်သော့ချက်စာလုံးကိုညွှန်ပြရန်အဘယ်မှာရှိသင့်အမည်ပြောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်:"ချစ်စရာ:"မည်သို့ပင်သင်ရှိသည်လိုမဟုတ်ရင်၊သူသိတယ်အကြောင်းသင်၏မေးခွန်းမေးခဲ့ကြမည်မဟုတ်စေလွှတ်သူ့ကိုရန်-နှင့်ပင်ထားသည်အတွက်အဖြေ။ ဘယ်တော့မှခွင့်ပြုမဆိုသင်ဝင်ရောက်ဖို့၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်။ အခုအချိန်မှာ၊ဒါကြောင့်အတူ၊ဒါမှမဟုတ်ဘယ်တော့မှ။ သင်ရမယ်၊မည်သည့်"၊အ၊"သို့မဟုတ်"၊"ကုသသူတို့ကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူယုံကြည်နိုင်ပါ။ (အရေးအသားကဗျာ)သင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်သာခြွင်းချက်ကိစ္စရပ်များတွင်၊တစ်ဦးအဖြစ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အပြောသောသူနှင့်အဘယ်သူ၏ေျပာခ်င္တာ။ ဒါပေမယ့်အကယ် မြဲရှိတယ်၊သို့မဟုတ်ပင်သာနှင့်အတူအနှီးအက္ခရာများ၊ထိုအခါ ကြွင်းသောအရာ၌အစဉ်ရှိလိမ့်မည်၊သို့မဟုတ်ပင်သာနှင့်အတူအနှီးအက္ခရာများ၊ဒီတော့သူတို့သာအယှက်များနှင့်နှောက်ယှက်လိမ့်မည်အလျင်အမြန်သို့လှည့်ရန်လို ။ အတွက်စာသင်နိုင်ရေးအတွက်အတူ။ အရောင်အဆင်းနှင့်အတူဇာတ်ကောင်အားသာချက်ရှိပါတယ်သောတစ်ဦးချင်းစီ အတွက်စကားပြောနိုင်ခွဲခြားပိုကောင်းကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်း၊အနက်ရောင်"ခဲသဲကန္တာရ"မဖန်တီး။ ဘာသာစကားနဲ့စကားလုံးအတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊အခြားအများပြည်သူနေရာများ၊လုံးဝဖယ်ထုတ်ထား။ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးမှာလိမ့်မည်၊ငါး၊လှောင်ပြောင်နှင့်အမျက်ထွက်ရမှာ၊အတွက်ငြိမ်းချမ်းသောစကားပြောဆိုချက်။ ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်တောင်းပန်သည်ကအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားပေါ်ပေါက်ပါဘူးအတွက်စကားပြောခန်း။ တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်လွဲချော်အတွက်စကားပြောခန်း၊ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်"ရ"ထဲက။ ကောင်းတယ်မဖြေဘူးဖြေဖို့။ ဤသို့အားဖြင့်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်လာငြီးငွေ့၊နှင့်ရိုသေလေးစားမှုမရှိခြင်းများအတွက်ဥပဒေကိုအလျင်အမြန်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်နေသည်၊ဒါကြောင့်ဆက်သွယ်စကားပြောအာ္ပေအီးမေးလ်ကနေတဆင့်သို့မဟုတ်ပရိသတ်ကိုအတွက်စကားပြော ။ ငါရေးတဲ့အခါနှောင့်ယှက်ခဲ့သည်အဖြစ်အွန်လိုင်းကပြတ်တောက် သူနစ်ဆက်သွယ်နှင့်အတူ။ ကျွန်မမထင်ဘူးသင်၌အမည်မသိစကားပြောခန်း။ စကားပြောဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ကယ်တင်သင်သည်သင်၏တစ်ဦးချင်းစီကို လိပ်စာ(ပရိုတိုကောနှင့်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ဥပမာအားဖြင့်)။ ဤသုံး လိပ်စာ၊ေအာ္ပေနိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ပံ့ပိုးပေးသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်မှသိတယ်သင်နဲ့သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်။ ထို့ကြောင့်၊အဆင့်ခွဲခြားနှင့်အတူလူများအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံကြော်ငြာတွေ။ အပြားအတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သင် မ်က္ႏွာဖုံဖုံ။ သို့သော်၊အဂၤါမျက်နှာပြားအားဖြင့်နွေးချက်တင်အသုံးပြုသင့်ပိုပြီးဈေးပေါပေါနှင့်လွန်းမယ့်။ ဒီအကြောင်းအရေးအပါဆုံးအမှုအရာ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ချက်တင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကြောင့်ရှိသည်ဖို့အနည်းငယ်ပျော်စရာ၊နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်တောတွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အပြုအမူ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာစကားဝိုင်း၊အကြောင်းအားလုံးလှုပ်ရှားမှုများ။ ဒီပြသနိုင်ပိုပြီးသို့မဟုတ်လျော့နည်းဖွဲ့စည်း၊ပေါ်မူတည်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြောကြည့်နေစဉ်အတွက်။ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုယ်ခေါ်နစ်သို့မဟုတ်အတိုကောက်"နစ်"၊မကြာခဏလူအဆင့်မြင့်တက်မှ ထုတ်ပြန်ချက်များ'။ တဆင့်အနေနဲ့အရပ်စကားပြော၊သင်အလျင်အမြန်ဆက်သွယ်လုံးစိမ်း။ ဒါဟာအစစေသည်အသွယ်အကြားအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလိင်ထက်၌"စစ်မှန်သောအသက်"။ ဖို့လိုလားသူတစ်ဦးဖြစ် ၊အ အတွက်ပုဂ္ဂလိကစကားပြောခန်းရှိရာဆုတ်ခွာနိုင်၊ထိုအခါစကားဆက်အတွက်သာ"လေး"။ ဤကဲ့သို့သော။ ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲပေါ့တူကာက္ေမှာဘလက်:သင်ဆက်သွယ်မည်ဝှက်အင်တာနက်အပေါ်ဘယ်တော့မှအတိအကျသိသူတစ်ယောက်ဖြစ်နောက်ကွယ်ကပုန်းအောင်းအထစ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ယောက်ျားဖြစ်ဟန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊နှင့်အပြန်အလှန်။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသောအမများထုတ်ဖော်မှန်ကန်သောအမည်၊ဖုန်းနံပါတ်၊လိပ်စာသို့မဟုတ်"ကိုယ့်တစ်ချိန်က"။ မမှာ၊လူအပေါင်းတို့သည်အားဖြင့်အဘယ်သူသည်သူတို့အဘို့တောင်း။
ဗီဒီယိုချက်တင်။ ချိန်းတွေ့။ ဗီဒီယိုချက်တင်။
ဖြစ်လာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလွန်ကြီးစွာသောအဖြစ်အပျက်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဖွင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းတစ်ဦး"အများဆုံးအိုကေ"၊အရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊ဗီစီးရီး၊သီချင်း၊ပြပွဲ၊လွှင့်၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ဘလော့ဂ်များအနှစ်နှစ်ဆယ်၊မဲသင်အကြိုက်ဆုံးစီမံကိန်းအတွက်အသီးအသီးအမျိုးအစား၊နှင့်သင်၏ပျက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သီးသန့်တံဆိပ်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်တွေ့မြင်ခဲ့သောဤအချက်ကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်ပါဝင်မဲနေ့တိုင်းအထိဒီဇင်ဘာဆယ်အပိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်သူတို့အဖို့သူများကိုဆု၊ သူကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျသဖြင့်၊သင်တို့အဘို့ကြီးလိမ့်မည်မိမိတို့အနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းအဘယ်သူမျှမကိစ္စ အဘယ်အဖွဲ့ချုပ်သူကကစားအဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့ကလပ်သူသည်ပြဇာတ်အရေးမပါဘူးအသက်ဘယ်လောက်နွေရာသီမှတ်တမ်းများကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆက်လက်။ သူရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်လော? ဒါဟာလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှ၊သူနားလည်ကြလိမ့်မည်? သင်တန်း၏၊ဒီအမေပြောပြလိမ့်မယ်၊ကလေးတွေကိုလူကြီး၊လူအပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်။ ၊မေမေ၊မေမေ၊မိခင်၊နှင့်အတူ၊သင်ပေါ့ပါးအတွက်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်ရှင်ဖို့သင်တို့အဘို့အယနေ့အချိန်တွင်နှင့်အမှုအစိုးရိမ်နည်း၊မညှိုး။ မိခင်ရဲ့နေ့အောင်အထိ၊စင်ကြယ်သော၊ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တောက်ပ။ နှင့်အသုိင္းအတွက်မျက်စိမှတောက်ပသောဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်များစွာသောကောင်း၊ကွဲပြားခြားနားသော။ သားသမီးမ်ားကိုတရားမျှတတဲ့ ။ အားလုံးသည်ငါ့အမိ၏အလွန်ကြီးစွာသောအလိုဆန္ဒ။ အသီးအသီးနေ့၌ဖွစျလိမျ့မညျအာက္ချမ်းသာပေးခြင်း၊ကောင်းသောမှော်အချိန်လေး။
ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို-ဤသည်တောက်ပသောစတော့ရှယ်ယာများ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအားလုံးအမျိုးသားများနှင့်ယောက်ျားလေးများ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားကြိုးစားနေငြီးငွေ့နှင့်အတူအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး။ အချို့သည်ဤအမှုအရာမပါဘဲအလုပ်သမားပြဿနာပါ။ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တီထွင်ခဲ့သည်အားဖြင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဟုခေါ်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ'။သည့်အတွက်မိန်းကလေးများပူဇော်ဆက်ဆံနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏မျက်နှာသာအတွက်အဘယ်သူနေသောသူတို့တတ်လုံလောက်တဲ့အာရုံစိုက်။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့-အခမဲ့ထိုလုပ်ငန်းများ၏ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ။ အတွင်းကွာခြားချက်ကတော့သင်တဲ့သူများ၏မရှိခြင်းအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲအကအသုံးပြုပြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချက်တင်ကစားတဲ့။ ကိုယ်ပဲကြည့်ဖို့အိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ထို့ကြောင့်၊အဘယ်အရာကိုဆက်သွယ်ရေး၏တစ်လမ်းမဟုတ်တဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၏ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများ။ အားလုံးမိန်းကလေးများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အရွယ်ရောက်ပြီး၊ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကလှုပ်ရှားခြင်း၊ဟုတ်ကဲ့ သူတို့စစ်ဆေးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ သာဒီပြီးနောက်၊ရှိခြင်းဖြစ်လာပြည့်အဝ-စုံမော်ဒယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမှထွင်းထွက်ခွင့်ဗီဒီယိုစကားပြောနေဆဲအကောင်းတစ်ဦးအကြားဆက်ဆံပါ။ ချက်တင်ကစားတဲ့-ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်။ သင်ထင်လျှင်ဤအမျိုး၊ဤအမှု၌၊သင်တို့၏ကျေးဇူးတော်အားမမှား။ အတွက်ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုဒိန်းမတ်ဘာသာစကားဆက်သွယ်ရေး၊အခွင့်အရေးများ၏အချို့သောလူများခန့်မှန်းခြေမျှဘဲ၊လူရွေးချယ်ထားတော်မူသောသငျသညျကျပန်းမှာ။ စေကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစား၊အယ်? ထိုကဲ့သို့သောချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားစကားပြော'ကစားတဲ့ရှိအများကြီးတစ်ငရဲ။ သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှကိုဝေခွဲပိုင်လိင်များအသွားရောက်ကြည့်ရှုသူအလူတွေကတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများ၏အမျိုးအစား။ ပါကပူခ်ိန္ကိုျတကယ်ပဲဆန့်ကျင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ၊ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့များမှာအများစုအတွက်-ပေးဆောင်ရသည်။ ဘယ်လိုမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏မရှိခြင်းအတွက်ပိုက်ဆံ? ဆက်ဆံရာတွင်အတွက်အဘယ်အရာကို? မတားမြစ်ရန်ပြေးအပေါ်အခမဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူအမျှကောင်လေးကျော်။.
သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပညတ်တရားသည်၊လွန်း။ ဤသူကားငါ၏အဘွား။ ငါဆုံးဖြတ်အဖြစ်နှင့်သမဝါယမအဖြစ်ငါတွေ့ငါ့အိပ်မက်တွေကိုဟုတ်မှန်လာ။ မယုံကြည်ဘူးသောအလွန်ပ်ာ္ရႊင္ျဇာတ်ကောင်နှင့်အမျိုးသမီးတူညီသောကျန်ရှိနေသင့်။ ပေါ့လျော့လျှင်၊ကျွန်မသိချင်တာက၊ကျွန်မမေးနိုင်တယ်။ ငါဖြစ်ချင်ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဝိညာဉ်ကို။ ငါဒါကြောင့်အံ့။ မတူအိပ်ပျော်တစ်ဦးတည်း၏ရှာဖွေရေးအတွက်အိပ်ရာ-)အကောင်းဆုံးကတော့၊ဒီအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏၃၀-၄၅။ ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူပြီးအခမဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်ရန်ရင်းနှီးဖစ္ၾက၏စိတ်ကူးယဉ်အဆင်သင့်လုပ်။ ဤသည်၏အသွင်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်မော်ဒယ်အတွက်ကုမ္ပဏီများအအချို့သောအခြေအနေလိုအပ်သောကြောင်းအဘို့အကောင်အထည်ဖော်လူတစ်ဦး၏၊ အိပ်မက်ကိုအမဖွစျနိုငျကွောငျးကိုခေါ်တဲ့အရာပါ။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊နေအတူတူ၊ကြောင့်အားလုံးပူးအ ။ ဒါဟာအတွက်အမြဲမေးသင်ဘယ်မှာရှိ။ သာမန်မှဧည့်သည်များဆိုက်သင်၏အိပ်မက်များ၏ပျော်ရွှင်သောအသက်တာနှင့်အတူသင့်အချစ်ဖွားလာခဲ့သည်။ မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့နှင့်"အထီးကျန်အတွက်မော်စကို"အမြဲဆက်ရှိနေလိမ့်မည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လူသစ်တွေ့ဆုံရန်နေရာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လာနှင့်အတူအထီးကျန်၏။ လျှင်သင်မည်သည့်ပြဿနာမျှကွုံတှေ့ရ၊ကျွန်တော်လင့်ခ်ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်အဘို့အပိုပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်သင်တို့အဘို့အဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့အေဂျင်စီအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာအပူအပင်ကင်းသို့မဟုတ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်ဆဲမော်စကို၌သို့မဟုတ်မော်စကိုဒေသ၊မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီနေရာမှာသင်ရနိုင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်အလားအလာဆွဲဆောင်မှု။ ထိုပေါ်တယ်၏အဆိုပါခရီးစဉ်ဆိုက်အလုပ်များအတွက်အချိန်တိုအ*ဒီနေရာမှာထားလည်းအများအပြားမိတ်ဖက်။ အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအဘို့အညာဘက်အမှတ်တံဆိပ်၊အများအတွက်ရှာဖွေသော သက်ဆိုင်ရာပရိုဖိုင်း။ အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်လူမှုချိန်းတွေ့အခြေအနေ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၊အစာရှောင်အခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္၊ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုရှိသည်သောသေချာအောင်လုပ်ပါပုံမှန်နှင့်မှန်မှန်သက်ဆိုင်ရာပို့စ်များချက်ချင်းအညစ်အပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကို။ များစွာသောချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမသိရပါဘူးဘယ်သူတက်အဆုံးသတ်မည်မှာမော်စကိုတွင်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကအတူဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားသည်အဘယ်သို့လုနီးပါး။ ဒီအောင်မြင်မည်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေရော။ နှင့်အတူစတင်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဘဝ(ဘဝ၊မမြင်နိုင်။) ဖြစ်နိုင်ခြေသီချုပ်။ ခုိဘဝရာထူးဖြစ်ကြောင်းအငြင်းပွားဖွယ်မှတုန့်ပြန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာ။ ကျွန်တော်ထင်သည်ရှိနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်။ ကိုသတိရပါသည်ဤအကြောင်းအရာ၏ဘက်လုံးပရိုဖိုင်း။ ဒါဟာကောင်းတဲ့ဖြစ်မှနောက်တဖန်သင်တို့ကိုကြည့်ပါ။ အွန်လိုင်းနေ့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသည်တောက်ပဆုံးဖြတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့လူများနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်း။ ငါကြီးစွာသောအချိန်။ အဓိကအရာတစုံတခုသည်အသက်ရှင်လိမ့်မည်တက္တက္ႂကြႂဖြစ်ရပ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများမှအဝင်အများပြည်သူတို့ပရိုဖိုင်း။ ငါသည်သင်ဆန္ဒရှိအပေါင်းတို့အားတစ်ဦးအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်အသစ်တွေ သူငယ်ချင်းများနှင့်မော်စကိုမြို့-မော်စကိုဒေသ။
အသစ်နည်းလမ်း၏ဝင်ငွေနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအွန်လိုင်းငွေရှာ။။။ဤအမျိုးအစားများ၏ဝင်ငွေရရှိနိုင်ဖို့အားလုံးချွင်းချက်မပါဘဲ။ အဘလော့ဂါများနှင့်ပိတျဆို့ဤအ အတွက်နှစ်ဦးစလုံးအရင်ကဆိုရင်နှင့်အတွေ့အကြုံ။ ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါကန့်သတ်ချက်ကို၊ဝင်ငွေနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ့်မှတ်ပုံတင်စနစ်ထဲမှာ။ ပူးတွဲမလိုအပ်။
၏၁၆ အသက်အနှစ် ၅၀ အနှစ်၊အိုင်ဗရီကို့စ်ထ်
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ပြေး၏အတည္ျဖုန်းအရေအတွက်၊အဘို့အရှာဖွေနေအမျိုးသမီး ၁၆-၅၀ နှစ်အရွယ်ကြောင်-၀၃၉၊ချက်တင်နှင့်သာ။ အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများ ၁၆-၅၀ နှစ်အရွယ်တွင်ဂ ၀၃၉ လုံးဝအခမဲ့။ အဲဘယ်သူမျှမကန့်သတ်အရေအတွက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူရှိရမယ်အတုအကောင့်ကို။ တွေ့ဆုံမည်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်အသီးအသီးအခြား၊သော်လည်းငါတို့ပြည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတည္ျဖုန်းနံပါတ်ရှာစတင်သည်သာအမျိုးသမီးအသက္ ၁၆ႏ၅၀ ကြောင်-၀၃၉၊ချက်တင်စကားပြောဆိုမှုနှင့်ဇုန်များ။
မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေး! ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အကျဉ်းချုပ်၏အလှဆုံးအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ! အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူလမ်းလျှောက် အခမဲ့အဘို့အသင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကို! ရာက္ၾများ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးအသိပညာကနေဥရောပ၊အာရှ၊အမေရိကနှင့်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာ။ ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအတွက်ထူးခြားတဲ့ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အာမခံရှာတွေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊သို့မဟုတ်ကိုယ့်လောက်ထွက်ရှာတွေ့မှသူတို့ကိုသင့်ဒေသခံဧရိယာ။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အသိပညာမှဝေးလံနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၊သို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အကြောင်းကိုသင်၏အမွေစားအမွေ။
သင်ပြီးသားအသုံးပြုသူတစ်ဦး? မှတ်ပုံတင်အတွက်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကိုဒီမှာ! ဘူးအပြေသေးဘူးလား။ သုံးစွဲဖို့ဤအဂၤါ၊သင်မှတ်ပုံတင်ထားရမယ်။ သင်ပြီးသားအသုံးပြုသူတစ်ဦး? တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ဒီနေရာရီ၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း! ဘူးအပြေသေးဘူးလား။ ယခုမှတ်တမ်းတွင်အသုံးပြုဤအဂၤါ။ ဂိမ္းကစား၊အားကစားအွန်လိုင်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစစ်တိုက်ရာတွင်အနိုင်ရဘို့အမြင့်မားသောရမှတ်ပြသ၏လုပ်! အဘို့ရှာကြသည်လျှင်ပျော်စရာမိန်းကလေးမိန်းကလေးတွေ၊ထို့နောက်သင်အကစားပြိုင်ပွဲဦးတည်ရာလေဆိပ်၊နှင့်နေ့တိုင်းရှိတယ်အသစ်အခမဲ့ဂိမ်းများ၊မိန်းကလေးများသည်အားကစားပြိုင်ပွဲ
ကျနော်တို့ကဆက်ပြောသည်ပါပြီအနူးမှကျွန်ုပ်တို့၏။ ချို့ယွင်းရှိ။ အလွန် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနဲ့အဆင်းလှသော။ ဒီဗီဒီယိုချက်တင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပိုဥရောပတိုက်တွင်(အင်္ဂလန်၊ဂျာမဏီ၊ပြင်သစ်၊အီတလီ၊စပိန္၊ဆြစ္ဇာလန္၊စသည်တို့ကို။)၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊မက္ကစီကို၊နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၊အဖြစ်နိုင်ငံ(ရုရှား၊ယူကရိန်းနှင့်ရုစ္)။ ဤသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ဤအမျိုးအစားကစားတဲ့ချက်တင်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့။ အဘယ်ကြောင့်ကရုချက်တင်ကစားတဲ့ရီဒါရေပန်းစား? အဆိုပါအချက်သင်ပေးသည်မွေ့လျော်ဖို့အခွင့်အသင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်။ ဒီနေရာမှာသင်မည်သို့အသုံးပွုနိုငျချက်တင်ကစားတဲ့ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့:ကျပန်းချိန်းတွေ့ခြင်းစကားပြောသည်စကားပြော။ ရိုးရိုးချက်တင်ကစားတဲ့(လူပဲထိုင်ပြီးစကားပြောသည့်သဘောသတ္မွတ္ခ်က္)နဲဂစ်တာကျွမ်းကျင်မှု၊သီချင်းဆိုခြင်း၊စသည်တို့ကို။ အချို့ကပင်စီမံခန့်ခွဲရန်နေရာအလောင်းအစား။ ၏သင်တန်း၊စာရင်းသွားနိုင်ပါတယ်အပေါ်အမြဲဖြစ်သောကြောင့်၊လူလွန်ခိုင်ခံ့သောတယ္လုိ့ပေးပြီသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်။ အမ်ားသိမဤစကားပြောသောကြောင့်၊အလားတူချက်တင်လုံလောက်သည်(ရုရှားကစားတဲ့၊စသည်တို့ကို။)။
သေးဘူးတွေ့ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာနေ့စွဲ? ထိုအဆိုက်များစာရင်းမှာ၊ ခြော၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်အသစ်တစ်ခုကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာ သင်တို့အဘို့အ! အပြင်ကနေချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊သူတို့ထဲကအများစုဟာအများကြီးသဘောမျိုးလုပ်မထား:တစ်ချိန်ချိန်၊ထိုပရိုဂရမ်များမှဖန်တီးရန်စီမံခန့်ခွဲထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းပေါ်တယ်တင်ကြန္ယက္၊ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်း။ နှင့်စောင့်ဆိုင်း။ နှင့်ဘာမှမဖြစ်ပျက်ခဲ့:ပထမဦးဆုံးလအတွက်၊ပင်လျှင်မလုံးဝ။ လျှင်အစိမ်းပို့တဲ့အမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများမကြာခဏလုံလောက်၊သင်တွေ့လိမ့်မည်စိတ်ဝင်စားစရာအသိအကျွမ်း၏။ အနည်းငယ်အတုမှာအများဆုံး၊အပရိုဂရမ်မာများတပ်ဆင်ထားနောက်ဆုံး-မြောင်းနေပါတယ်။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကဲ့သို့ ၊ကင်းမိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ချစ်သောအများစု၏ထင်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြီးသားကြိုးစားခဲ့ပြီးပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းအတွေ့အကောင်း။ သူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ရှိညပ်သည်မုချခံထိုက်၏ထက်မနည်းကိုရှာအသစ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအပေါ်သွားမှာဤအချက်မှာများအတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦး။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းနယူးအော်အပေါ်ချိန်းတွေ့တယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုမှတစ်ဦးပေါ်တယ်၊တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောမှန်နှင့်လျင်မြန်စွာ၎င်း၏။ မအဖြစ်ကြီးမားသောအဖြစ်ဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်၊ဒါပေမယ့် အတော်လေးထူးခြားသည်၊နှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းများရှာဖွေတဲ့အဖော်အဘို့အဘယ်သို့သောသူ-စ-ကိုတွေ့။ ရို များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အနည်းငယ်ကျွမ်းကျင်သူများက၏လယ်ပြင်တွင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ။ ကြားတွင်အခြားအရာတို့ကို၊သူမ၏အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအေဂျင်စီနိုင်ငံအဖြစ်မန်နေဂျာကိုအဘို့အကျပန်းချိန်းတွေ့တယ်။
တိုက်ရိုက်ကစားတဲ့အများဆုံးမူရင်းမျိုးချိန်းတွေ့၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိန်းဗီဒီယိုစကားပြောသူများကဖန်တီးသောဆက်သွယ်ရေးများအတွက်လူတို့နှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်း။ သုံးပြီးဗီဒီယိုစကားပြော၊သင်အလွယ်တကူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည်အားဖြင့်ဗီဒီယိုကင်မရာနှင့်အတူမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေး။ အကြံပြု၊သင်ကြိုးစားခေတ်သစ်ကိရိယာ၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူဗီဒီယိုကိုပူးတွဲပါမှသင်၏စကားပြောဆို။ အသာလွန်၏ဒီဗီဒီယိုချက်တင်ဟုခေါ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲရှစ်။ ထို့နောက်အလျင်အမြန်အတွက်ချိန်းတွေ့။ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း
သင်၌ပျော်စရာရှိသည်ဖို့ကစားတဲ့၊ဒါပေမယ့်မလိုချင်ကြဘူးအချက်အလက်မျှဝေဖို့သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်း၊သင်ပထမဦးဆုံးအားလုံး၏ကူညီလိမ့်မည်ဟုအသစ်တော်လှန်ရေးနားချက်တင်။ တဆင့်နားချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာဖြစ်လိမ့်မည်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လူတွေကိုဘယ်သူသင်ချိတ်ဆက်အတွက်၊သောအလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်၊ငါတို့သည်လည်းသင့်ကြောင်းမမေ့မလြော့ဤကိစ္စတွင်အတွက်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေကြတယ်အသစ်တစ်ခုကိုအမျိုးအစားဆက်သွယ်ရေးအရာ၊အချို့သောအာရုံ၊လှသောဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်တာ္လွန္ေ။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုချက်တင်ကစားတဲ့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်ကနေလူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း၊နှင့်လည်းအပေးအခွင့်အလုပ်-လုိင္စင္သက္တမ္းအတွက်ခရီးသွား။ ငါတို့သည်လည်းမမေ့မလြော့ရပါမည်အကြောင်းဤကိစ္စတွင်အတွက်ကျနော်တို့အကြောင်းစကားပြောနေကြသည်အချို့ကိုတပ်ဆင်ထား၏၊သောလည်းအရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်၊ကျနော်တို့မမေ့မလြော့ရပါမည်အကြောင်းစကားပြောအစိမ်းမဟုတ်ပဲထူးခြား ၏နည်းလမ်းကို၏ရွေးချယ်မှုအ ၊ဒါပေမယ့်လည်းအကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုအဘို့အကိုဆက်သွယ်ထားသောနှင့်အတူလိင်။ ဒီတော့လျှင်သင်ရုတ်တရက်ဝမ်းနည်းပြီးအထီးကျန်၊အသစ်ကိုခံစားပျော်မွေ့ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်နားချက်တင်။ နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။ တေပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သည်သာရည်ညွှန်းနှင့်အတူ
။ အဆင်ပြေသုံးစွဲသူများ၏ဧည့္ခန္း၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ချဲ့ထွင်၏စြမ္းခေတ်သစ်က်ဘ်နည်းပညာများ၊ဖော်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုအရေအတွက်ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်မိတ်ဖက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအသုံးပြုမှုဒေတာဘေ့စအသုံးပြုသူများသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များ)သူတို့ကိုအသီးအသီးပုံဖြစ်ဖို့ရှာဖွေနေအဘို့အသစ်တစ်ခုသဘောမျိုး ကျော်နောက်တဖန်အ၊အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့်အလားတူကတိကဝတ်အတူတူပါပဲ။ ရှုပ်ထွေး။ ချိန်းတွေ့စနစ်ကလည်းအလွန်ရိုးရှင်းပြီး၊ဗီဒီယိုကင်မရာနှင့်အခြားလူများနှင့်အတူ ကြည့်ရှုခွင့်ထူးများ၊ဗီဒီယိုစကားပြော။ သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ဘာပျော်စရာနှင့်အဘယျသို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအလွယ်တကူတင်ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများသင့်ပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုရန်ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဓါတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအဘို့ပြီးပြည့်စုံသောမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ။ ပင္လုံရိုက္ႏ၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၊ဓာတ်ပုံများအတွက်၎င်းတို့၏မူလအရွယ်အစား။ ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးသော။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနှင့်အများကြီးပိုတဲ့ ၃-မိနစ်ကားမောင်းရန်ကွာဝေးသည်။ ကၽြႏ္ုပ္၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်နှင့်အတူသင့်အမည်၊အသက်အရွယ်နှင့်ကျား-"ရှိကိုဆက်ကပ်"။ ငါသည်အဘယ်သို့သိရကြဘူး။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့လိင်ချိန်းတွေ့မော်စကိုမြို့အခြားမြို့။.
အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကမ္ဘာ့အကျယ်ပြန့်ဝက်ဘ်နှင့်ချိန်းတွေ့အတွက်ကိုယ့်တဦးတည်းကိုနှိပ်ပါ၊သင်အပေါ်ဝင်ဖို့တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်-အားဖြင့်လူကြိုက်များတဲ့လူမှုကွန်ယက်များ။ သင်လိုအပ်သမျှအဘို့အကောင်းတစ်ဦးဆက်သွယ်ရေးအတွက်အစာ၊နှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်အသုံးပြုကင်မရာများ၊မိုက်၊ကီးဘုတ်နှင့်ရာက္ဇာ ။ ဗီဒီယိုချက်တင်။ ရုရှား တစ်မူထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှု၏ဝဘ်ချက်တင်၊ခွင့်ပြုသောသင်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်'အင္တာနက္' ဆက်သွယ်ဖို့တိုက်ရိုက်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်အသုံးပြုမည်သည့်ကမ်၊နှင့်ကီးဘုတ်။ သင်နိုင်အောင်စျေးပေါဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖို့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများ၊ဖန်တီးချက်တင်'ကစားတဲ့'နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်း ၊အဘို့အဥပမာတစ်ခုနှင့်အတူမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှမည်သည့်မြို့ကိုပင်။ နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်'စာသား'ချက်တင်သည်ကြီးမြန်စာသား-အခြေပြုနှင့်အမည်မသိဆက်သွယ်ရေး။ နိမိတ်လက္ခဏာသာဗီဒီယိုစာသားမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို-မှတဆင့်လူမှုရေးကွန်ရက်သို့မဟုတ်တက်လက်မှတ်ထိုး။ စတင်စကားပြောခန်း၊ဆုံ၊ချစ်ခြင်းနှင့်လုပ်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်အားလုံးချက်တင်အခန်းပေါင်းသည်အခမဲ့နှင့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်း၊အကြာထက်လျော့နည်းတစ်မိနစ်။ အဆိုပါ၏ဆုရှင်ကို'အညိုရောင်ထွက်'အတွက်နှစ်ဆယ်-။ ထွက်သယ်ဆောင်အားဖြင့်ဒိန်းမတ်အသိုင်းအဝိုင်း၏က်ဘ်အသုံးပြုသူများ၏လူမှုရေးကွန်ရက်ဆိုက်များ။ အနိုင်ရစကားပြောတယ်အမျိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံးချက်တင်အနှစ်နှစ်ဆယ်။' နောက်တဖန်အယခုနှစ်ပါဝင်။ သင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုစီမံကိန်းလိုအပ်ထောက်ပံ့ကျေးဇူးပြုပြီး၊ကိုယ့်မျှဝေဗီဒီယိုစာသားအတွက်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်။
အဖြစ်နာမည်တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်အတူအရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ရီးရဲလ်ဓါတ်ပုံများ
ရောအတွက်ချစ်ကြည် သိမည်သည့်အသက်အရွယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကို၊အစည်းအဝေးလေးဆယ်လူမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံရသည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်ရှာဖွေနေကြသည်အသီးအသီးအခြားအဖို့ရှာဖွေသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ထိုမေးခွန်း၏နေရာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးနောက်အနှစ်လေးဆယ်ဖြစ်လာ၊အလွန်အရေးကြီး။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လူကို၊ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းသာဖြစ်ခြင်း၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားပြောပြရန်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သို့မဟုတ်ရုံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ထို့နောက်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကလပ်၏လေးဆယ်ကျော်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ရှာကြသည်အတွက်။ သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ကျော်သည်လူများအဘို့အသက်လေးဆယ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်ပါသည်၊အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သင်အနည်းငယ်ရှက်သို့မဟုတ်မပြုဖို့ဘယ်လိုသိအပေါ်ခရီးဦးကြိုပြုလမ္း၊စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဘားတန်း။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအချိန်ဖြုန်းဖို့အသည်းအသန်ရှာဖွေနေအဘို့အစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်စည်ကားလမ္း။ အတွက်ချိန်းတွေ့ကလပ်လေးဆယ်ကျော်၊သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါစိတ်ဝင်စားစရာလူတစ်ဦးလျှင်ပင်၊သင်မစွန့်ကြပါ။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စများ၏အရည်အသွေးအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတို့တွင်၊သင်ကျိန်းသေသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးတွေ့။ အကြိုက်ဆုံးအတွက်ပထဝီဝင်၏သဘောကိုစကားလုံးနှင့်နီးစပ်အကျိုးစီးပွားအတွက်၊အသက်အရွယ်၊သာနယ်။ ရွေးဝိသေသလက္ခဏာများ၏အလားအလာမိတ်ဖက်အတွက်အရှာဖွေရေး။ လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ခဲ့ပြီအချစ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို၊ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်ရပြီနှင့်အတူမေတ္တာလူတစ်ဦးကျွန်တော်တို့ချစ်ရ။ ဟုတ်လျှင်၊ထို့နောက်အရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားရိပ်။ သူတို့ကတော့ဂရုစိုက်ပါတီ၊ကခုန်၊သို့မဟုတ်သောက်သည်။ သူတို့အဘို့ရှာကြသည်သောနှလုံး လူကောင်းတစ်ယောက်ကိုနှစ်သက်သင်၏အသက်တာ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊အချက်ကြောင့်ကျမတို့နေထိုင်နေကြရတဲ့ခေတ်တွင်ခေတ်မီနည်းပညာ၊ဒါကြောင့်ဖြစ်လာကြောင်းပိုသိလာအောင်။ မကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့အလေးဆယ်၌ဖြစ်လာကြပါပြီပိုပြီးဝယ်ထားသည်၊ဒါပေမယ့်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူထိုင်များ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တီနှင့်ပျက်ပြယ်ပြီးဖြည့်စွက်အဝထုတ်လုပ်မှုကိုသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရေးသက်။ ဒါကြောင့်သတ္တိကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကိုယ်နဲ့၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့၊သင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ခဲ့သည်အထူးဖန်တီးဖို့လူတွေကိုကူညီအတွက်၎င်းတို့၏အသက်ရတဲ့ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရှာဖွေရန်အသစ်တစ်ခုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေ။ အာ္၊အစဉျမသိရကြလိမ့်မည်အရာကိုဖွင့်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်လျှင်တစ်ခုတည်းနှင့်သင်နှစ်လေးဆယ်ကျော်အရွယ်-ဒါဟာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်၏အသက်တာကျော်-ဒါကြောင့်ပဲအသစ်တွင်သင့်အသက်တာအဘို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိ။ အများစုကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအသက်ကျော်လေးကိုကြည့်ချင်ကြဘူးများအတွက်ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာဒီအသက်အရွယ်သည်အကြောင်းရင်းတစ်ခုအရေ။ အချို့လူများမှာကြောက်လို့ဒီအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်ထိုသူတို့အချို့လမ်းအတွက် ဆက်ဆံရေးကလေးများနှင့်အတူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊အချို့သောပြီးသားပြု၊အခြားသူများရုံမလုံခြုံဟုခံစားရနှင့်ကြောက်လန့်ပျက်ကွက်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုမေးအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်း-ဘယ်လိုအများစုကအသက်တာတွေရှိလဲ? နှင့်တစ်ဦးတည်းသာရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်အချိန်မဖြုန်းတီးကြပါနဲ့ကြောက်၏။ ယူရန်တစ်ဆင့်ပြီးသင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ အသက်ကျော်ပြည်သူ့လေးဆယ်ဘူးရှာဖွေနေစတင်ရန်ဘယ်မှာသိသည်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ သို့သော်၊လျှင်အဆိုပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုအဟုဆိုကြသည်သို့မဟုတ်သူတို့၏တွေ့ကြပြီဟုသောသူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်း။ ယခုသင်ပြုသမျှအားလုံးသည်မှတ်ပုံတင်မည်ဖြစ်ပြီးဖန်တီးတဲ့ပရိုဖိုင်းအတွက်ချိန်းတွေ့ပေါ်မှာ။
ဒီနေရာမှာလူတိုင်းချက်တင်စကားပြောနိုင်အခမဲ့၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပိုဆောင်း။ ရုံအပြေးနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို။ ဤစကားပြောသည်တင်းတင်းဝင်ရောက်ဖို့ခေါင်းစဉ်၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ပိုမိုတိကျသော-မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ မိန်းကလေးများ။ ဆက်သွယ်ရေးအဘို့အတွေအများကြီးပေးရစားစရာဘို့အသီးအသီးပါဝင်၊ဒါပေမယ့်အချိန်အများကြီးယူ။ ဒီမှာ၊အဖြစ်အားလုံးအတွက်အလိုရှိသည်အတိုင်းသိသောအလွန်မကြာခဏအစားကိုမွဗီဒီယိုကင္မရာ၏အစိမ်းတွေ့မြင်နိုင်သည်ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများ။ သတိထားပါ၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှအာမခံချက်အကြောင်းဤသည်အမှန်တကယ်ဓာတ်ပုံရိုက်သောသူတို့၏အသင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို။ ထို့အပြင်စိမ်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်၏။ ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်သတိပြုရကြမည်။ ဒါဟာသက်ဆိုင်သည်အားလုံးနှင့်အတူစကားပြောကျပန်း နှင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိနှင့်အတူတစ်ဦးကလူစိမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သင့်ကြောင်းမမေ့မလြော့ဒီစကားပြောသင်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနိုင်ပြီးသင်သိကလူကို။ အချို့ဗီဒီယိုချက်တင်အတူတကွဆောင်ခဲ့၏သူငယ်ချင်းများ၊ဒါပေမဲ့ဒီသီးခြားဝန်ဆောင်မှုများအဘို့အဗီဒီယိုစကားပြော။ ဥပမာအားဖြင့်၊ချက်တင်(အၾကိဳက္ဆံုး၊အၾကိဳက္ဆံုး)ခွင့်ပြုဖို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစကားပြောဖို့မိတ်ဆွေများ၏စက်ဝိုင်း၏အသိအကျွမ်း။ ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုရန်အမးခြန္းအဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတစ်ဦးသင်ဆက်သွယ်နိုင်။ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာစကားပြောနိုင်လိမ့်မည်ရေးသားဖို့ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစကားကိုလူတစ်ဦးသင်အတူ။
ဒိန္း-တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအွန်လိုင်းရုပ်သံ။ စောင့်ကြည့်ဖို့အွန်လိုင်းရုပ်သံ။ အင်တာနက်ရုပ်သံ။ အင်တာနက်ရုပ်သံ။
အတွေ့တဲ့မိန်းကလေးက ၁၈ ဗီဒီယိုများ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့မပါဘဲဗီဒီယိုမှတ်ပုံတင်ရေး တွေ့ဆုံဖို့ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုအခမဲ့ချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ အြန္လိုင္း ချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း